Bibliotaptap Manampy Ny Haitiana Hiatrika Ny Horohorontany Lehibe. · Global Voices teny Malagasy
Bibliotaptap Manampy Ny Haitiana Hiatrika Ny Horohorontany Lehibe.	Voadika ny 23 Janoary 2013 9:24 GMT
Zarao: Raha toa ka 10 Janoary 2010 androany, dia efa nangina nihaino ny vaovao momba ny horohorontany nandrava an'i Port-au Prince, renivohitr'i Haiti ny eran-tany. Tena nahavaky fo ireo sary, izay tsy nijanona ho dona lehibe niseho fotsiny fa narahan'ny tombana hoe, tao anatin'ny minitra vitsy dia olona 222 000 no namoy ny ainy ary trano 2 tapitrisa no rava. Raha ohatra ka natao tamin'ny fo io tombana io, ny kajikajy dia milaza fa matahotra sy manahy ny ainy sy ny an'ireo namany sy ny fianakaviany ireo Haitiana 9 tapitrisa.
Tsy voatantara ao anaty boky iray iny horohorontany iny, fa famakiam-bokiny no manampy ny vahoaka Haisiana hiatrika azy. Izany dia noho ny nanombohan'ny Famakiam-boky tsy voafetran-tsisintany ny famakiam-boky aminà fiara izay mivezivezy manerana ny renivohitry ny firenena izay manome boky sy manolotra fitaovana hahafahana mahazo fampitàm-baovao sy ny fahalàlana.
BiblioTaptap famakiam-boky mandehandeha any Haiti. Sary avy amin'ny tranonkalan'ny Famakiam-boky tsy Voafetran-tSisintany.
Miasa any amin'ny firenena any Amerika, Afrika sy Azia, dia entina any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana sy ireo tratran'ny loza voa-janahary sy ireo tandindonin'ny loza voajanahary sy ny ady ny tetikasa tahaka itony. Miara-miasa amin'ny tranom-bokim-pirenena izay andàlam-panamboarana sy ny Birao Nasionalin'ny Boky ary ny Fikambanana ho an'ny Fahalalàna sy ny Fahalalahana Haitiana (FOKAL), any Haiti io fikambanana io.
Manambatra ny heriny mizara fanafody, rano, sakafo, fitafiana, fitaovam-pialofana ho an'ny trà-boina ny governemanta sy ireo fikambanana iraisam-pirenena rehefa manoloana ny loza voa-janahary. Na izany aza, mihoatra lavitra noho izay filàn'ny vatana ny filàna fototry ny olona, mitatra hatrany amin'ny saina, ny fanahy, ny fo na izay faritra nofinidiny hitehirizany ireo fahatsiarovana momba ny zavatra efa niainany. Hazavain'i Badis Boussouar, Mpiandraikitra ny Serasera ao amin'ny Tranomboky tsy Voafetran-tSisintany ny anjara asan'ny famakiam-boky ao anatin'ity vanim-potoana ity :
Ho an'ny Tranomboky Tsy Voafetran-tSisintany, dia tsy misy resaka fa tsy maintsy manompana ny ampahany betsaka amin'ny ezaka ataony amin'ny fanatsarana ny ara-pitaovana ilaina andavan'andro ho an'ireo tra-boina ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena sy ny governemanta. Nefa tokony hisy fitandremana lehibe atao mba hamelomana ny saina, toy ny fepetra faharoa, hanampy ireo tra-boina hiatrika ny loza sy hahafahany miroso indray. Ny boky sy ny fanehoan-kevitra dia manampy amin'ny fitaizana ny saina sy hahafahana manome lanja ny tena ary fahafaha-mijoro amin'ny fotoanan'ny krizy. Amin'ny alàlan'ny boky, ny solosaina na fiofanana, dia mankahery ny tsirairay sy manome azy ireo ny fitaovana hananganana indray izay very ny fidirana ao amin'ny filazam-baovao sy ireo loharano ara-kolontsaina.
Aingam-panahy avy aminà bibliobus na famakiam-boky aminà fiara fitaterana izay efa nisy tany amin'ny firenen-kafa, indrindra tany ambanivohitra ity vondrona tranomboky aminà fiara ity, ary teraka tamin'ny zava-nisy nampalahelo izay nandravan'ny horohorontany ny ankamaroan'ny tranomboky tany Haiti, tahaka izany ihany koa ny sekoly 4000. Ny 80%-n'ny sekoly any Port-au-Prince sy ny 60%-n'ny sekoly any amin'ny faritra atsimo sy andrefan'ny firenena dia rava na simba, araka ny rakitra avy amin'ny Komisionan'ny Vonjy taitra amin'ny Loza Voajanahary na ny Disasters Emergency Committee .
Nantsoina hoe Biblio Taptaps izy ireny ho fahatsiarovana ireo fiarakaretsaka tao an-toerana. Nanomboka niasa tamin'ny Jolay 2012 ny voalohany, ary hisy roa amboniny amin'ity volana Martsa ity. Araka ny asehon'ity lahatsary manaraka ity [fr], ity tetikasa ity dia manetsika ny Haitiana amin'ny sokajin-taona rehetra, indrindra fa ny ankizy, izay matetika tena voakasika.
Mitondra boky 400 ireo bibliotaptaps tsirairay, misy tantaram-pitiavana, tononkalo sy tantara an-tsehatra, izay amin'ny tenin-dreny ny antsasany , ary mivezivezy manerana ny faritra manodidina any Port-au Prince. Ankoatra ny boky momba ny haisoratra, dia misy boky mikasika tantara, politika, toekarena sy kolontsaina, avy ao Haiti sy eran'izao tontolo izao. Ny mpampiasa ity tolotra ity dia afaka mijery sary, boky mikasika ny taokanto ary rakibolana, ary zavatra maro hafa. Fidian'ny tompon'andraikitry ny hetsika isan'andro ny boky, arakaraka izay toerana voalahatra haleha mba hanaitaitra ny famakiana azy, na ho an'ireo ankizy mandray anjara amin'ny asan'ny BiblioTaptap, na ireo tanora te-hahafantatra misimisy kokoa ny zava-misy eo amin'ny fireneny ka te-hampivoatra izany, eny na dia ho an'ny lehibe sy ireo efa nahazo taona mikaroka ny vaovao momba ny fahasalamana na ny fomba hikarakarana ny fiaraha-monina misy azy na ny tontolo iainana aza.
Raisina an-tanan-droa ny fanomezana boky, nefa nasiana fitandremana tsara mba tsy hanelingelina ny fitehirizana boky ao an-toerana amin'ny fanomezana boky sesehena.
NY HAMEHAN'NY VAKY BOKY
Ireo endrika rehetra ireo dia ampahany amin'ny faharesen-dahatra amin'ny herin'ny boky mba hanovozana fahalalàna fototra ho an'ny tena miaraka amin'ireo fahalalàna mahavelona ho fiatrehana ny loza nateraky ny horohorontany, izay sady tsy ho adino no tsy ho voavoatra ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny UNICEF manohana ny fampianarana tao aorian'ny loza ary miara-miasa amin'ny Famakiam-boky tsy Voafetran-tSisintany any Haiti.
Ny hevitra vaovaon'ny Tranomboky tsy Voafehin-tsisintany antsoina hoe ny hamehan'ny vaky boky dia manamafy indray ny faharesen-dahatr'ilay vondrona fa ny boky sy ny famakiana azy dia fitaovana iray mavesa-danja hiatrehan'ireo tra-boina ny karazanà loza tahaka itony. Manao antso avo amin'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena misahana ny fanampiana amin'ny maha-olona izy ireo mba : “1) hanitatra ny fandaharan'asa famakiam-boky, ny kolontsaina ary ny fampianarana, izay mitaiza ny sain'ny olona ary manampy ny tsirairay hiatrika ny loza ; sy 2) hanao ny fahazoana mikirakira ny vaovao sy ny boky ho laharam-pahamehana ho an'ireo misahana ny famonjena ny maha-olona iraisam-pirenena.
Azo atao ny manampy azy amin'io foto-kevitra io amin'ny alalan'ny fanaovana sonia fangatahana iraisam-pirenena iray, toy ny efa nataon-dry Tzvetan Todorov, Mario Vargas Llosa, Zygmunt Bauman, J.M. Coetzee, Robert Darnton, Roger Chartier sy ireo maro hafa efa nanao izany.
Mampieritreritra anao ny momba ny fanampiana entin'ny boky amin'izao toe-javatra izao izany. Angamba misy mihevitra any Bengladesh hanome ny tononkalon'i Rabindranath Tagore ho an'ny Haitiana, na any Rosia misy misaina hanolotra izay vitan'i Maiakovski, fa ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaiko dia ny andalan-tononkalo nosoratanà poeta Breziliana Manuel Bandeira, izay mahatalanjona rehefa tanteraka eto amin'izao tontolo izao : Belo belo belo tenho tudo quanto quero (Kanto,kanto,kanto, azoko izay rehetra niriko). Mandritra izany, mitombo ny fankatoavana ny havesa-danjan'ny boky sy ny vaky boky amin'ny tranga toy ny loza sy ny loza voajanahary. Queens Library, ohatra, dia nanolotra boky ho an'ireo tra-boina tamin'ny rivodoza Sandy tany Amerika. Mba hitondra fanantenana ho azy ireo, Walt Whitman.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraDavi Padilha Bonela
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany 18 ora izayAmerika LatinaFotoana izao Hampitsaharana Ny Didimpoitram-behivavy Ao Amin'ny Firenena Tokana Ao Amerikana Latina Mbola Ahitana izany
22 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaMitondra Fanantenana Sy Fanasitranana Any Palestina Ny ‘Faribohitra Miloko Marevaka’ Ao Gaza
22 ora izayEoropa Afovoany & AtsinananaIndizena Mpiompy Diera, Tezitra Amin'ny Goavan'ny Solika Ao Siberia
MpanoratraDavi Padilha Bonela